Super Light Waterproof
Home > Products > Super Light Waterproof (Total 24 Products for Super Light Waterproof)
Super Light Waterproof - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
Isu tinoziva Super Light Waterproof vaiti nevatengesi / factory kubva kuChina. Wholesale Super Light Waterproof with high quality as low price / cheap, one of Super Light Waterproof leading brands from China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Solar Garden Lamp LED Remote Control Remote Lamp
Tag: Super Light Waterproof , Remote Sensing Lampu , Outdoor Country Home
Outdoor country homes . Solar street lamp, sensor inonzwisisa chiedza chekudzivirira, zero magetsi ekugadzirisa kwezuva, kutsvaira nokukurumidza, irradiation, kumirira mukuru. Yakave iri usiku hwose, zero magetsi, maawa manomwe ekuvhenekera, maawa...
Solar Outdoor Waterproof Double Head Human Induction Lamp
Tag: Muviri wevanhu Induction , NeChiedza Chaviri , Outdoor Wall Lamp
Muviri wevanhu mukududzirwa . Chiedza cheSolar chine misoro miviri . Green kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, simba rekuchengetedza uye low carbon. Solar energy PIR mumuviri womunhu induction light induction double-headlamp. Amorphous silicon solar...
Tag: Garden Garden Landscape Lighting , Outdoor Fence Light , Waterproof Wall Lamp
Mvura isina simba yezuva inotambanudzira mwenje worusvingo, rudo rweupenyu, ruda. Waterproof wall wall . Iyi yezuva yakashandura mabhanhire e LED inogona kushandiswa munzvimbo dzakawanda. Shandura chiedza chikuru usiku chinogona kukanganisa mwana...
Tag: Solar Outdoor Waterproof Spotlight , 6 Mucherechedzo Dzemagetsi Ekunze Kwemagetsi Anodzivirira , Mvura-uchapupu Mwenje
Solar outdoor waterproof spotlights mashizha emhepo anphibious. Dhizha dzezuva rinobudirira dzinoshandura simba rezuva kuti rive magetsi uye rinozvichengetedza muBatri yakagadzirwa-LED. Icho chiedza chekudzivirira magetsi inogadzirisa kutengesa...
Outdoor Solar Projection Lamp Waterproof Two-Color Lamp
Tag: Kujekesa Mvura , Double Color Lamp , Outdoor LED Lights
Solar power projection lamp, double color changing light, highlighting the waterproof , specially designed for outdoor, waterproof and lightning proof, intelligent control, daylight light, daybreak light out. Outdoor LED lights Yakasungirirwa ne...
Tag: Portable Camping Lamp , Ruoko Rwakakupa Emergency , Multi Function Radio
Solar camp lamp manual power generating emergency emergency, can use out power supply charge 5V inokurudzira mutero wefoni. Paunenge uri kunze, kuwanikwa kunogona kuitwa nemaoko, kuripa foni. Ruoko ruchiita kukurumidza . Simba rezvitubu nemaoko...
Tag: The Lawn Projection , Solar Outdoor Waterproof , Kujekesa Projection Lampu
Munda mutsva weganda rezuva, mwenje wekudzivirira kwezuva, mwenje wekunze kweganda, mvuraproof function. Inobatsira yezuva kunze kwechiedza chemvura . Chiedza chinoratidzira mwenje chine simba rakasiyana rinowanikwa kune vatengi kuti vasarudze....
Kunze Kwema Multi-Function Solar LED Emergency Flashlight Radio
Tag: Multiple Mitsara Yokubhadhara , Two Band Radio , Ne Flash Warning
Iyi iri kunze kwema multi-functional solar LED flashlight emergency light, uye ine basa reredhiyo. Inotsigira maitiro akawanda ekubhadhara , ayo anogona kutengeswa nesimba rezuva. Mvura inonaya, inogona kushandiswawo kugadzira magetsi emuviri...
Solar Flashlight Survival Hammer Multifunctional Compass
Tag: Long Beam Flashlight , Nekuchengeteka Hammer , Compass uye Knife
Solar energy ine simba flashlight, asiwo nehutete nyundo, magetsi anonyevera, pfuma inoshandiswa, mucheki, kambasi basa. Iyo kambasi nemudziya zvakakosha zvikuru kupona zvinhu kunze, iyo inoshanda yakasiyana-siyana inoshandisa flashlight. Yenguva...
Multi-function Solar Flashlight Radio Alarm
Tag: Multi-function Radio , Kuva neAlarm Function , Manual Power Generation
A radio-multi-function . NeSOS alarm function , inogona kushandiswa se flashlight, flash uye LED dawati tafura. Mumamiriro ezvinhu akaoma, inogona kushandiswa kushevedza rubatsiro nekutsvaga, Bhuku rekushandisa simba , Bhuku nemaoko uye USB...
Solar Traffic Signal Warning Light
Tag: Zvitsva zveMotokari dze LED , Solar Traffic Flashlights , Chiratidzo cheMigwagwa Chiedza Chenjevero
Nzira yekuchengetedza gwara kumativi ose kana pamberi pekufambisa kwemigwagwa inofanira kuiswa pamberi pekuyeuchidza vatyairi kuti vadzike uye vatevedze nokuchenjerera. Kuisa zviratidzo zvekunyevera kune vatyairi kana vanofamba-famba munharaunda...
Tag: Multi - Direction Traffic Signal , Mugwagwa Yezvokuchengetedza Chigadziko , Zvitatu - Ratidza Chiratidzo Chigadziko
Dare rezuva rinoshandiswa kukwereta nickel-hydrogen rechargeable bateri. Kana chiedza chiri chakakwana, panopisa gorosi rinobudisa zvino uye magetsi kutengesa bhetri. Usiku, bhatiri inokonzera magetsi emagetsi kumutoro kuburikidza nekudzivirira...
Tag: Super Bright Amber , Traffic Warning Light , Solar LED Display
Chirwere Chiedza Chiedza ndechiedza chechiedza chemashamba chinoshandisa simba rezuva kuti rive simba rayo. Inoshanda sechinyevero kune motokari dzinofamba kuenda uye kubva pamiganhu yekudzikisa kuitika kwezviitiko zvemigwagwa. Kwete kwete simba...
Tag: Red Blue Yellow , Solar Power Supply , Traffic Flash Indication
Pakati pemarudzi akasiyana-siyana emararamiro ekuchenesa kwezuva, kumhanya kwemafuro, kukurumidza kwemhepo, kupaka, kunyatsoteerera njodzi, kuyambuka kwezvikepe uye mamwe marudzi anoshandiswa zvikuru. Migwagwa yemigwagwa yemigwagwa nemhando...
Solar waterproof projection wireless lawn lamp
Tag: Outdoor Rainproof Solar Lawn Lamp , LED Solar Lawn Lamp , 0.5W Solar Lawn Lamp
Girazi yezuva yezuva yakasvibhenekera mwenje yezuva yakagamuchira 0.5w monocrystalline silicon solar panel. Kushanda maawa 8-10 maawa, kutengesa nguva 6-8 maawa, chiedza chekudzivirira. Denga rezuva rinodzokorora mabhatiri masikati uye magetsi...
Super Light Waterproof kubva kuChina, Direct Buy kubva kuChina inotungamirira vatengesi pamadhorobha emadhorobha. Tsvaga zvizere Super Light Waterproof zvigadzirwa pa ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD uye uwane high quality Super Light Waterproof zvakananga kubva kuvakavimbika vechiChinese Super Light Waterproof vatengesi nevatengesi. Tumira zvaunoda kutenga & Tsvaga mhinduro pakarepo.